၂၀၂၀ အာကာသစူးစမ်းရေး အောင်မြင်မှု
၂၀၂၀ မှာ နာဆာက အင်္ဂါဂြိုဟ်စူးစမ်းရေး အပါအဝင် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှု အပြင် အာကာသဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေ အများကြီးရှိခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာဆာက သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာ ပဒေသာတင်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“နာဆာက အောင်မြင်တာ သုံး - လေးခုလောက် ပြောလို့ရပါတယ်။ solar system ကျနော်တို့ရဲ့ နေစကြာဝဌာ စူးစမ်းမှု၊ နောက်တခုက human space exploration အာကာသထဲ စူးစမ်းလေ့လာမှု၊ နောက် ဒုံးပျံတွေ တီထွင်မှု၊ ဒုံးပျံ အသစ်တွေ ပေါ့နော်။ ဒီအင်္ဂါဂြိုဟ်ကို နောက် ၅ နှစ် ၁၀ နှစ်လောက် အတွင်းမှာ သွားမယ် ဆိုရင် အခု နောက်ဆုံး သုံးနေတဲ့ ဒုံးပျံကို သုံးလို့ မရတော့ဘူး။ ဒုံးပျံ အသစ်တွေ အတွက် တီထွင် အောင်မြင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်တခုက ဂြိုဟ်တုတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုတွေ၊ မိုးလေဝဿဂြိုဟ်တုတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။”
မေး။. ။“ဒီအင်္ဂါဂြိုဟ် စူးစမ်းလေ့လာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာဆာက ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တာလေး တွေ ပထမဆုံး ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“အင်္ဂါဂြိုဟ် စူးစမ်းလေ့လာမှုအတွက် အောင်မြင်မှုထဲမှာ Mars 2020 ဆိုတဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ် ၂၀၂၀ ဆိုတဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ် ဆင်းမယ့် စက်ရုပ်ကို လွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်။ မကြာခင်က။ အဲဒါကတော့ နာဆာရဲ့ အောင်မြင်မှု အကြီးဆုံးပါပဲ။. လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် ၆ နှစ် လောက်ကတည်းက စီစဉ်ထားတာပါ။ အခု လောလောဆယ် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရောက် နေတဲ့ စက်ရုပ် ကားကလေး အပြင် အခု နောက်ဆုံး လွှတ်တင်တဲ့ စက်ရုပ် ကားကလေးကတော့ perseverance လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေး ငါး ခြောက်လ တုန်းက လွှတ်တင်လိုက်ပါပြီ။ ၂၀၂၁ မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ကို ဆင်း- သုတေသနတွေ အများကြီး လုပ်ပါမယ်။ ”
မေး။. ။“အဲဒီမှာ မြန်မာအမျိုးသမီး သုတေသနပညာရှင် တယောက်ရဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တခု လည်း ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒါလေး ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒါ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ဒေါ်မီမီအောင်ပါ။ Jet Propulsion Lab ကပါ။ ကယ်လီဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့နာဆာ သုတေသနဌာနခွဲတခု ကပါ။ သူတို့လုပ်တဲ့ အစီအစဉ်ကတော့ perseverance လို့ ခေါ်တဲ့ စက်ရုပ်ကလေးကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၂၁ မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ် ဆင်းတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ဝမ်းပိုက်မှာ
ရဟတ်ယာဉ်လေး ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ ဒေါ်မီမီအောင်နဲ့ သုတေသန ပညာရှင်တွေ ဆင်လိုက်တဲ့ ယာဉ်ပါ။ သူတို့က အဓိက က အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ သက်ရှိသတ္တဝါ ရှိသလား ဆိုတာကို စပြီး စူးစမ်း လေ့လာတာပါ။ ရေရှိမှ သက်ရှိ ဖြစ်နိုင်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေရှာ သွားတာပါ။
တကယ်တော့ စက်ရုပ်က အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ ဖြေးဖြေးချင်း တရွေ့ရွေ့နဲ့ လုပ်ရတဲ့ အတွက် efficient မဖြစ်ဖူး။ သုတေသန လုပ်ရတာ ကြာတယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ကင်းထောက် ရဟတ်ယာဉ်လေးကို ဆင်ပေးလိုက်တာ။ သူ့ဟာသူ အလိုလို ပျံသွားမယ်။ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်း ပြီးတော့မှ သုတေသန လုပ်လို့ ရမယ်။ ဒါဟာ အောင်မြင်မှုကြီး တခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ အင်္ဂါဂြိုဟ် စူးစမ်းလေ့လာရေး အပြင် အာကာသဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေလည်း ဒီနှစ်ထဲမှာ အများကြီး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဟုတ်ပါတယ်။ စကြာဝဌာကြီးအတွက် စူးစမ်းလေ့လာမှုဆိုရင် သုတေသနက ရူပဗေဒ နိုဘဲလ်ဆု ရတဲ့ စင်္ကြာဝဌာ ကိုလေ့လာတဲ့ ရူပဗေဒ ပညာရှင် တွေ cosmology နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အောင်မြင်မှုပါ။ သူတို့က ဒီကျနော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာပါဝင်တဲ့ နဂါးငွေ့တန်း လိုပဲ တခြားနဂါးငွေ့တန်း အကြီးကြီးရှိပါတယ်။ အလင်းနှစ် သန်းပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ နေရာမှာပါ။ အဲဒါကို ဒီကနေ ရေဒီယို တယ်လီစကုပ်နဲ့ ရိုးရိုး မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်တာမဟုတ်ဖူး ဒါက ရေဒီယိုလှိုင်းနဲ့ ကြည့်ပြီးမှ ပုံပြန်ဖေါ်ယူရတဲ့ တယ်လီစကုပ်ပါ။ အဲဒါကနေမှ တခြား နဂါးငွေ့တန်း ကြီးရဲ့ အလယ် တဲ့တဲ့မှာ ကြယ်စုကြီး တခု အလယ်မှာ စုနေပြီးတော့ အဲဒီ ကြယ်စုကြီး ကနေပြီးတော့မှ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်တဲ့ ဟာကို လေ့လာတာပေါ့နော်။ လေ့လာတဲ့ အခါ ကျတော့ အိုင်စတိုင်းရဲ့ နှိုင်းရ သီအိုရီပေါ့နော်။ theory of relativity ဟာ မှန်တယ် ဆိုတာကို ဒီနှစ်ထဲမှာ အထောက်အထား အရ သူတို့ တိတိကျကျ ပြောနိုင်တာပါ။
အမှန်ဆိုရင် ဒီဟာကို လေ့လာခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် သုံးဆယ်လောက် ကတည်းက လေ့လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ထဲကျမှ သေသေချာချာ ပြောနိုင်တယ်။ ဒီ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာဟာ general theory of relativity က တကယ်ကို အဲဒီနေရာမှာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို အထောက်အထားအရ ကျနော်တို့ ပြောနိုင်ပြီ ဆိုတာကို သူတို့ တင်ပြနိုင်တဲ့ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ satellite ဂြိုဟ်တု နည်းပညာမှာရော ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်မှု တွေရှိပါသလား။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဟုတ်ပါတယ်။ ရှိပါတယ်။ Tesla ကားတီထွင်တဲ့ Elon Mask ကနေ သူက spaceX ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေး၊ နောက် ဒုံးပျံ ဆောက်တာ အဲဒီ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပါ။ သူကနေ ဒီနှစ်ကနေ စပြီး ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ၊ မိုးလေဝဿ နဲ့ ပတ်သက်တာကို ဂြိုဟ်တု အသေးလေးတွေ - mini satellilte အများကြီးကို စုပြီး ဒုံးပျံ တခုထဲနဲ့ လွှတ်တင်လိုက်တယ်။ အာကာသထဲ ရောက်သွားတော့မှ အဲဒီဂြိုဟ်တု အကုန်လုံးကို ဖြန့်လိုက်တာပါ။ ဒီနှစ် ထဲမှာ ဂြိုဟ်တု တထောင် ကျော်လောက် - အဲဒီ mini satellilte တွေ တင်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကျိုးရလဒ်က ဂြိုဟ်တုတွေ တကမ္ဘာလုံးကို ဝန်းရံနေတဲ့အတွက် ဂြိုဟ်တု တခုနဲ့ တခု ကြားမှာ synchronized လုပ်မယ်။ အဲဒါက ဂြိုဟ်တု တခုနဲ့တခုကြားမှာ အချက်အလက်တွေကို အမြန်ဆုံး ပို့နိုင်မှာကြောင့် ဝါယာလက်စ် နည်းပညာအရ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုတွေဆို ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ပိုပြီး အတ်ိအကျ ရနိုင်မယ်။ သိပ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေကနေ ဈေးခပ်ပေါပေါနဲ့ ဒီဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာတွေကို ပိုပြီးတော့ အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အောင်မြင်မှု တခုပါ။ သူတို့ တွက်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဒီဂြိုဟ်တုက တနှစ်ကို အလုံး တထောင် - ထောင့် လေးရာလောက် လွှတ်တာတောင် ဂြိုဟ်တု တသောင်းကျော်လောက် အဲဒီ mini satellilte တွေ တသောင်းကျော်လောက် အများကြီးကို လွှတ်တင်ရမှာပါ။ အဲဒါတွေကို နောက် လေးငါးနှစ် အတွင်းမှာ ပစ်တင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းကျိုး တွေကတော့ အများကြီး ပါပဲ။”
မေး။. ။“ကောင်းကျိုးတွေ ရသလို အာကာသအမှိုက်ဖြစ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ထဲမှာပဲ အာကာသအမှိုက်တချို့ကို ပြန်သုံးနိုင်အောင်လည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဆိုးကျိုးက space debris အာကာသထဲမှာ ရှိတဲ့ အမှိုက် သရိုက်ပေါ့နော်။ ဂြိုဟ်တုမှာ သက်တမ်းရှိတယ်။ နောက် ငါးနှစ် ဆယ်နှစ်ဆို သုံးလို့ မရတော့ဘူး။
သူ့မှာလျှပ်စစ် ဓါတ်အား သုံးနိုင်တဲ့ ပမာဏ လုံးဝ မရှိတော့တာ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်ကို နေကနေ ရနိုင်တဲ့ ဆိုလာပြားတွေ ပျက်သွားတာ။ geosynchronous orbit ကမ္ဘာရဲ့ လည်နှုန်းအတိုင်း ကမ္ဘာကို အလိုလို ပတ်နေတဲ့ ပတ်လမ်းကြောင်းကနေ သူက လွတ်သွားတယ်။ အဲဒီလို လွတ်သွားရင် သူက ကမ္ဘာ့လေထုထဲ ဝင်ပြီး နောက်တော့ ပျက်သွားတယ်။ ဒီလို ဂြိုဟ်တုကို အသုံးမပြုနိုင်တဲ့ အပြင် သူက အမှိုက်လို ဖြစ်သွားတယ်။ အခုဆိုသုံးလို့မရတဲ့ ဂြိဟ်တုတွေ ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိနေပါပြီ။ ဆိုးကျိုးကိုလည်း သူတို့ မြင်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ နောက်ပိုင်း သူတို့ လွှတ်လိုက်တဲ့ ဂြိုဟ်တု တခုက အဲဒီ ပျက်သွားတဲ့ သုံးလို့မရတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပတ်လမ်းကြောင်း လွဲသွားတဲ့ ဂြိုဟ်တုကို သူက လှမ်း ယူလိုက်တာ။ လှမ်းယူပြီးတော့မှ သူ့ကို ပတ်လမ်းကြောင်း အမှန်အတိုင်း ပြန်တင်ပေးလို့ ရပြီ။ သုံးမရတဲ့ ဂြိုဟ်တုကို နောက် ၅ နှစ်လောက် ပြန်သုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်တုနောက်တခုကို ဒီနှစ်ထဲမှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ တင်ရုံတင် မကဘူး သူက Intel Set 19 ထင်တယ်။ အဲဒါက ပျက်သွားပြီလေ။ အဲဒါကို သူတို့ ပြန်ပြီးတော့ ပုံမှန် ပတ်လမ်းကြောင်းထဲ ရောက်အောင် ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ် ခင်ဗျ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ အဲဒါ ထူးခြားတာတခုပါ။”
၂၀၂၀ မှာ နာဆာက အင်ျဂါဂွိုဟျစူးစမျးရေး အပါအဝငျ အာကာသစူးစမျးလလေ့ာမှု အပွငျ အာကာသဆိုငျရာ တိုးတကျမှုတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး နာဆာက သိပ်ပံပညာရှငျ ဒေါကျတာ ပဒသောတငျကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“နာဆာက အောငျမွငျတာ သုံး - လေးခုလောကျ ပွောလို့ရပါတယျ။ solar system ကနြျောတို့ရဲ့ နစေကွာဝဌာ စူးစမျးမှု၊ နောကျတခုက human space exploration အာကာသထဲ စူးစမျးလလေ့ာမှု၊ နောကျ ဒုံးပြံတှေ တီထှငျမှု၊ ဒုံးပြံ အသဈတှေ ပေါ့နျော။ ဒီအင်ျဂါဂွိုဟျကို နောကျ ၅ နှဈ ၁၀ နှဈလောကျ အတှငျးမှာ သှားမယျ ဆိုရငျ အခု နောကျဆုံး သုံးနတေဲ့ ဒုံးပြံကို သုံးလို့ မရတော့ဘူး။ ဒုံးပြံ အသဈတှေ အတှကျ တီထှငျ အောငျမွငျမှုတှေ ရှိပါတယျ။ နောကျတခုက ဂွိုဟျတုတှေ၊ ဆကျသှယျရေး ဂွိုဟျတုတှေ၊ မိုးလဝေဿဂွိုဟျတုတှရေဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရှိပါတယျ။”
မေး။. ။“ဒီအင်ျဂါဂွိုဟျ စူးစမျးလလေ့ာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး နာဆာက ထူးထူးခွားခွား အောငျမွငျတာလေး တှေ ပထမဆုံး ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“အင်ျဂါဂွိုဟျ စူးစမျးလလေ့ာမှုအတှကျ အောငျမွငျမှုထဲမှာ Mars 2020 ဆိုတဲ့ အင်ျဂါဂွိုဟျ ၂၀၂၀ ဆိုတဲ့ အင်ျဂါဂွိုဟျ ဆငျးမယျ့ စကျရုပျကို လှတျတငျလိုကျပါတယျ။ မကွာခငျက။ အဲဒါကတော့ နာဆာရဲ့ အောငျမွငျမှု အကွီးဆုံးပါပဲ။. လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈ ၆ နှဈ လောကျကတညျးက စီစဉျထားတာပါ။ အခု လောလောဆယျ အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါရောကျ နတေဲ့ စကျရုပျ ကားကလေး အပွငျ အခု နောကျဆုံး လှတျတငျတဲ့ စကျရုပျ ကားကလေးကတော့ perseverance လို့ ချေါပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ လေး ငါး ခွောကျလ တုနျးက လှတျတငျလိုကျပါပွီ။ ၂၀၂၁ မှာ အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါကို ဆငျး- သုတသေနတှေ အမြားကွီး လုပျပါမယျ။ ”
မေး။. ။“အဲဒီမှာ မွနျမာအမြိုးသမီး သုတသေနပညာရှငျ တယောကျရဲ့ ရဟတျယာဉျတခု လညျး ပါတယျလို့သိရပါတယျ။ အဲဒါလေး ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဟုတျပါတယျ။ အဲဒါ အလှနျစိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးပါတယျ။ ဒျေါမီမီအောငျပါ။ Jet Propulsion Lab ကပါ။ ကယျလီဖိုးနီးယား တောငျပိုငျးမှာ ရှိတဲ့နာဆာ သုတသေနဌာနခှဲတခု ကပါ။ သူတို့လုပျတဲ့ အစီအစဉျကတော့ perseverance လို့ ချေါတဲ့ စကျရုပျကလေးကို ဖဖေျေါဝါရီလ ၂၀၂၁ မှာ အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါ ဆငျးတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ဝမျးပိုကျမှာ
ရဟတျယာဉျလေး ထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ အဲဒါ ဒျေါမီမီအောငျနဲ့ သုတသေန ပညာရှငျတှေ ဆငျလိုကျတဲ့ ယာဉျပါ။ သူတို့က အဓိက က အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါမှာ သကျရှိသတ်တဝါ ရှိသလား ဆိုတာကို စပွီး စူးစမျး လလေ့ာတာပါ။ ရရှေိမှ သကျရှိ ဖွဈနိုငျမယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ရရှော သှားတာပါ။
တကယျတော့ စကျရုပျက အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါမှာ ဖွေးဖွေးခငျြး တရှရှေ့နေဲ့ လုပျရတဲ့ အတှကျ efficient မဖွဈဖူး။ သုတသေန လုပျရတာ ကွာတယျပေါ့။ အဲဒီတော့ ကငျးထောကျ ရဟတျယာဉျလေးကို ဆငျပေးလိုကျတာ။ သူ့ဟာသူ အလိုလို ပြံသှားမယျ။ အခကျြအလကျတှေ စုဆောငျး ပွီးတော့မှ သုတသေန လုပျလို့ ရမယျ။ ဒါဟာ အောငျမွငျမှုကွီး တခုအနနေဲ့ သတျမှတျလို့ ရပါတယျ။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့။ အင်ျဂါဂွိုဟျ စူးစမျးလလေ့ာရေး အပွငျ အာကာသဆိုငျရာ တိုးတကျမှုတှလေညျး ဒီနှဈထဲမှာ အမြားကွီး ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဟုတျပါတယျ။ စကွာဝဌာကွီးအတှကျ စူးစမျးလလေ့ာမှုဆိုရငျ သုတသေနက ရူပဗဒေ နိုဘဲလျဆု ရတဲ့ စင်ျကွာဝဌာ ကိုလလေ့ာတဲ့ ရူပဗဒေ ပညာရှငျ တှေ cosmology နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အောငျမွငျမှုပါ။ သူတို့က ဒီကနြျောတို့ရဲ့ ကမ်ဘာပါဝငျတဲ့ နဂါးငှတေ့နျး လိုပဲ တခွားနဂါးငှတေ့နျး အကွီးကွီးရှိပါတယျ။ အလငျးနှဈ သနျးပေါငျး ထောငျပေါငျးမြားစှာ ရှိတဲ့ နရောမှာပါ။ အဲဒါကို ဒီကနေ ရဒေီယို တယျလီစကုပျနဲ့ ရိုးရိုး မကျြလုံးနဲ့ ကွညျ့တာမဟုတျဖူး ဒါက ရဒေီယိုလှိုငျးနဲ့ ကွညျ့ပွီးမှ ပုံပွနျဖျေါယူရတဲ့ တယျလီစကုပျပါ။ အဲဒါကနမှေ တခွား နဂါးငှတေ့နျး ကွီးရဲ့ အလယျ တဲ့တဲ့မှာ ကွယျစုကွီး တခု အလယျမှာ စုနပွေီးတော့ အဲဒီ ကွယျစုကွီး ကနပွေီးတော့မှ ပေါကျကှဲမှု ဖွဈတဲ့ ဟာကို လလေ့ာတာပေါ့နျော။ လလေ့ာတဲ့ အခါ ကတြော့ အိုငျစတိုငျးရဲ့ နှိုငျးရ သီအိုရီပေါ့နျော။ theory of relativity ဟာ မှနျတယျ ဆိုတာကို ဒီနှဈထဲမှာ အထောကျအထား အရ သူတို့ တိတိကကြ ပွောနိုငျတာပါ။
အမှနျဆိုရငျ ဒီဟာကို လလေ့ာခဲ့တာ လှနျခဲ့တဲ့ အနှဈ သုံးဆယျလောကျ ကတညျးက လလေ့ာတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနှဈထဲကမြှ သသေခြောခြာ ပွောနိုငျတယျ။ ဒီ ဟောကိနျးထုတျခဲ့တာဟာ general theory of relativity က တကယျကို အဲဒီနရောမှာ ဖွဈနတေယျ။ ဒါကို အထောကျအထားအရ ကနြျောတို့ ပွောနိုငျပွီ ဆိုတာကို သူတို့ တငျပွနိုငျတဲ့ နှဈ ဖွဈပါတယျခငျဗြ။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့။ satellite ဂွိုဟျတု နညျးပညာမှာရော ထူးထူးခွားခွား တိုးတကျမှု တှရှေိပါသလား။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဟုတျပါတယျ။ ရှိပါတယျ။ Tesla ကားတီထှငျတဲ့ Elon Mask ကနေ သူက spaceX ဆိုတဲ့ ပုဂ်ဂလိကပိုငျ ကုမ်ပဏီ ဖွဈပါတယျ။ သူက အာကာသစူးစမျးလလေ့ာရေး၊ နောကျ ဒုံးပြံ ဆောကျတာ အဲဒီ ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျပါ။ သူကနေ ဒီနှဈကနေ စပွီး ဆကျသှယျရေးနဲ့ ပတျသကျတာ၊ မိုးလဝေဿ နဲ့ ပတျသကျတာကို ဂွိုဟျတု အသေးလေးတှေ - mini satellilte အမြားကွီးကို စုပွီး ဒုံးပြံ တခုထဲနဲ့ လှတျတငျလိုကျတယျ။ အာကာသထဲ ရောကျသှားတော့မှ အဲဒီဂွိုဟျတု အကုနျလုံးကို ဖွနျ့လိုကျတာပါ။ ဒီနှဈ ထဲမှာ ဂွိုဟျတု တထောငျ ကြျောလောကျ - အဲဒီ mini satellilte တှေ တငျခဲ့နိုငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အကြိုးရလဒျက ဂွိုဟျတုတှေ တကမ်ဘာလုံးကို ဝနျးရံနတေဲ့အတှကျ ဂွိုဟျတု တခုနဲ့ တခု ကွားမှာ synchronized လုပျမယျ။ အဲဒါက ဂွိုဟျတု တခုနဲ့တခုကွားမှာ အခကျြအလကျတှကေို အမွနျဆုံး ပို့နိုငျမှာကွောငျ့ ဝါယာလကျဈ နညျးပညာအရ ဆကျသှယျရေး ဂွိုဟျတုတှဆေို ရာသီဥတု ဆိုငျရာ ပိုပွီး အတိအကြ ရနိုငျမယျ။ သိပျမဖှံ့ဖွိုးသေးတဲ့ နိုငျငံတှကေနေ ဈေးခပျပေါပေါနဲ့ ဒီဆကျသှယျရေး နညျးပညာတှကေို ပိုပွီးတော့ အသုံးခနြိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ အောငျမွငျမှု တခုပါ။ သူတို့ တှကျကွညျ့တဲ့ အခါမှာ ဒီဂွိုဟျတုက တနှဈကို အလုံး တထောငျ - ထောငျ့ လေးရာလောကျ လှတျတာတောငျ ဂွိုဟျတု တသောငျးကြျောလောကျ အဲဒီ mini satellilte တှေ တသောငျးကြျောလောကျ အမြားကွီးကို လှတျတငျရမှာပါ။ အဲဒါတှကေို နောကျ လေးငါးနှဈ အတှငျးမှာ ပဈတငျရမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ကောငျးကြိုး တှကေတော့ အမြားကွီး ပါပဲ။”
မေး။. ။“ကောငျးကြိုးတှေ ရသလို အာကာသအမှိုကျဖွဈလာတဲ့ ဆိုးကြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂၀၂၀ ထဲမှာပဲ အာကာသအမှိုကျတခြို့ကို ပွနျသုံးနိုငျအောငျလညျး လုပျပေးနိုငျပါပွီ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဆိုးကြိုးက space debris အာကာသထဲမှာ ရှိတဲ့ အမှိုကျ သရိုကျပေါ့နျော။ ဂွိုဟျတုမှာ သကျတမျးရှိတယျ။ နောကျ ငါးနှဈ ဆယျနှဈဆို သုံးလို့ မရတော့ဘူး။
သူ့မှာလြှပျစဈ ဓါတျအား သုံးနိုငျတဲ့ ပမာဏ လုံးဝ မရှိတော့တာ၊ လြှပျစဈဓါတျကို နကေနေ ရနိုငျတဲ့ ဆိုလာပွားတှေ ပကျြသှားတာ။ geosynchronous orbit ကမ်ဘာရဲ့ လညျနှုနျးအတိုငျး ကမ်ဘာကို အလိုလို ပတျနတေဲ့ ပတျလမျးကွောငျးကနေ သူက လှတျသှားတယျ။ အဲဒီလို လှတျသှားရငျ သူက ကမ်ဘာ့လထေုထဲ ဝငျပွီး နောကျတော့ ပကျြသှားတယျ။ ဒီလို ဂွိုဟျတုကို အသုံးမပွုနိုငျတဲ့ အပွငျ သူက အမှိုကျလို ဖွဈသှားတယျ။ အခုဆိုသုံးလို့မရတဲ့ ဂွိဟျတုတှေ ထောငျနဲ့ခြီပွီး ရှိနပေါပွီ။ ဆိုးကြိုးကိုလညျး သူတို့ မွငျလာပါတယျ။ အဲဒီတော့ နောကျပိုငျး သူတို့ လှတျလိုကျတဲ့ ဂွိုဟျတု တခုက အဲဒီ ပကျြသှားတဲ့ သုံးလို့မရတဲ့ ဒါမှမဟုတျ ပတျလမျးကွောငျး လှဲသှားတဲ့ ဂွိုဟျတုကို သူက လှမျး ယူလိုကျတာ။ လှမျးယူပွီးတော့မှ သူ့ကို ပတျလမျးကွောငျး အမှနျအတိုငျး ပွနျတငျပေးလို့ ရပွီ။ သုံးမရတဲ့ ဂွိုဟျတုကို နောကျ ၅ နှဈလောကျ ပွနျသုံးလို့ရအောငျ လုပျပေးနိုငျတဲ့ ဂွိုဟျတုနောကျတခုကို ဒီနှဈထဲမှာ တငျလိုကျပါတယျ။ တငျရုံတငျ မကဘူး သူက Intel Set 19 ထငျတယျ။ အဲဒါက ပကျြသှားပွီလေ။ အဲဒါကို သူတို့ ပွနျပွီးတော့ ပုံမှနျ ပတျလမျးကွောငျးထဲ ရောကျအောငျ ပွနျထညျ့ပေးလိုကျတယျ ခငျဗြ။ ဒီနှဈထဲမှာ အဲဒါ ထူးခွားတာတခုပါ။”